नेपाल सर,कारले युरि;या मल समेत बंगलादेश सँग पैचो माग्यो,पूरा पढ्नुहोस् ! – मेचीमहाकाली डट नेट NEWS
नेपाल सर,कारले युरि;या मल समेत बंगलादेश सँग पैचो माग्यो,पूरा पढ्नुहोस् !
काठमाडौं । गहुँ, तरकारी र तोरी रोप्ने मौसममा म,लको च,रम अ,भाव हुने देखेपछि नेपालले बंगलादेशसंग ५० हजार टन यु,रिया म,ल (पैँचो) सापटी माग्ने भएको छ । मल पैंचो मा,ग्न दुई देशका स,रकार प्र,मुखबीच नै छल;फलको तयारी गरिएको पररा,ष्ट्र म,न्त्रालय स्रोतले जनायो । ‘नेपालका प्र,धानमन्त्री छलफलका लागि तयार हुनुहुन्छ, बंगलादेशका प्र,धानमन्त्री शेख हसिनाको समय मिलेको छैन,’ पर,राष्ट्र स्रो,तले भन्यो । यसै साता छ;लफल गरेर म,लको विषय टुं,गोमा पु,याउने गरी दुवै दे,शबाट कु,टनीतिक प,हल भएको म,न्त्रालयले जनाएको छ ।
कृषि म,न्त्री घनश्याम भुसालको प,हलमा ढाकास्थित नेपाली दू,तावासमार्फत बंगलादेशको मल वि,भागसँग गरिएको छ,लफलमा स,कारात्मक ज,वाफ पाएपछि दुई देशका स,रकार प्र,मुखबीच छल,फलको कुरा अगाडि बढेको हो । बंगलादेशसंग १० लाख मे,ट्रिकटन मल मौ,ज्दात रहेको छ । ५० हजार ट,न नेपाललाई पैँचो दिन बंगलादेश तयार भएको कृषि तथा पशुपन्छी विकास म,न्त्रालयले जनाएको छ ।कात्तिकदेखि पुससम्म युरिया र डीएपी गरेर एक लाख २० हजार मेटिक टन मल नेपालमा आव,श्यक हुने म,न्त्रालयको अनु,मान छ । त,त्कालका लगि ५० हजार मे,ट्रिक टन बंगलादेशबाट ल्याइने र बाँकी पनि जो,हो गर्दे जाने म,न्त्रालयको तयारी छ ।
कृ,षि साम,ग्री लि,मिटेडले ठे,क्का लगाएको ठे,कदारमार्फत त,त्काल मल आउने अव,स्था नदेखेपछि कृषिम,न्त्री घनश्याम भूषालले एक महिना अघिदेखि सा,पटीमा मल माग्न छलफल थालेका थिए । दुई ठूला छिमेकी मुलक चीन र भारतसहित ओमन, रसिया, साउदी अरब, बंगलादेश लगायतका मुलुकसंग त,त्काल नेपालको ग,र्जो टा,र्न छलफल गरे पनि बंगलादेश मात्रै मल दिन रा,जी भएको मन्त्रा,लय स्रोतले बतायो ।
‘नेपालको आ,ग्रह भारतले त सुन्दै सुनेन, चीनले मलको भाउ निकै महँ,गो भन्यो,’ म,न्त्रालय अ,धिकारी भन्छन्, ‘चीनबाट ल्याउन सजिलो पनि थिएन, त्यसैले बंगलादेशमा पहल भयो । ‘नेपालमा र,सायनिक म,ल भि,त्र्याउन पहिलोपटक ठे,क्का पाएर म,ल नल्याएका नेपाली ठे,केदारलाई क्ष,तिपूर्ति र भ,विष्यमासमेत अ,योग्य हुनेगरी कार,बाहीको तयारी म,न्त्रालयले गरेको छ । ५० हजार मेट्रिक टन मल ल्याउने स,म्झौता गरेका ठे,केदार शारदाप्रसाद अधिकारीको सैलुङ इन्टरप्राइजेज र हुमनाथ कोइरालाको होनिको मल्टिपललाई भदौ २१ गते कार,बाहीको नि,र्णय हुने स्रोतले बतायो ।
‘स,म्झौताको म्या,द भदौ २० मा सकिन्छ, त्यसपछि ध,रौटी ज,फत गर्ने मात्रै नभई किसानले पाएको दुः,ख, कृ,षि उ,त्पादनमा आउने ह्रा,सको हिसाब जोडर क्ष,तिपूर्ति सहितको का,रबाहीको तयारी गरेका छौँ,’ स्रोतले भन्यो । २५ हजार मे,ट्रिक ट,न यु,रियाका लागि २८ पुसमा र २५ हजार ट,नका लागि ४ माघमा गएकिो टेण्डरमा दुई कम्पनीले ठेक्का पाएका थिए ।असारे धानको रोपाईको लागि भदौ २० गतेसम्म सबै मल ल्याइपुर्‍याई सक्नुपर्नेमा ती कम्पनीले एक किलो मल पनि नेपाल भि,त्र्याउन सकेका छैनन् । अर्कोतर्फ उत्पादनकसँग मल किनेको वा नकिनेको भ,न्नेसम्मको जानकारी कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडलाई दिन नसकेको कम्पनीले जनाएको छ।ओके खबरबाट!
Previous सरकारले २ लाख जनालाई १०० दिनको रोजगारी दिने,हेर्नुहोस!
Next सरकार!महामारीको बेला भाडादर चारगुणा वृद्धि किन नी?हामी नेपाली नै हौं,सरकार भए पहिलाको भाडामा नै स्वदेश झिकाईयोस: छबिलाल सुवेदी